FAKAFAKA: baikoin’ny firehana | NewsMada
FAKAFAKA: baikoin’ny firehana
Aingam-panahy, hono, no manosika ny penina hikorisa. Mbola izy io ihany koa no manery ny tanana handritsoka sy hikitika ny zavamaneno ! Saingy efa nisy nanadihady ve hoe : avy aiza ny aingam-panahy ? Teraka avy amin’ny zavatra iainan’ny tsirairay, hono, izy io. Anisan’izany ny hitan’ny maso, ny ren’ny sofina, ny tsapan’ny tanana, sns. Azo veroka tokoa, raha maheno hira mitaraindraina fa aingam-panahy teraky ny fitadiavam-pahalalahana izany. Mety ho hira vokatry ny embona sy hanina kosa ireo andrenesana angola eny antsefantsefany eny. Raha maheno gadona somary haingana sy mihana, azo an-tsaina fa hira avy any amin’ny toerana main’ny tsy fahampian’ny rano izany, sns.
… Fa ny ankehitriny kosa, toa sarotra ihany ny mamaritra na mamantatra ny momba ny hira iray. Tsy tafapetraka mazava na ny aingam-panahy na ny tosika hoentiny fa ny firehana no mibahan-toerana. Malaza ny gadona na ny karazan-kira tahaka izao, andao hanao tahaka io. Mahafinaritra ny mampiasa zavamaneno tahaka itsy, andao mba hampiasa. Mitranga amin’izay ny fifanoherana satria terena hanaraka ilay firehana ny kanto atao. Saika ahitana endrika tahaka io avokoa ny ankamaroan’ny zavakanto eto Madagasikara.
… Voatery mikaroka ny mpanakanto mba tsy hampibaribary izay fifanoherana izay. Mipoitra etsy sy eroa ireo karazana fomba fiteny na anarana isan-karazany. Anisan’ny malaza amin’izany ny fanakambakambanana sy fampivadivadiana isan-karazany na ny « fusion », raha eo amin’ny tontolon’ny hira. Ao koa ireo hira hiraina amin’ny feo vahiny kanefa ilay gadona miharihary be izao fa gadona malagasy. « Fomba fiady avokoa izany », hoy ilay mpanakanto iray izay !
Raha zohina sy tomorina akaiky io fanadihadiana io, nanjary voabaikon’ny firehana ilay aingam-panahy. Mbola zavakanto ihany ve ny iantsoana an’izany ? Eny, angamba ! Kanto vokatry ny firehana ! Na, tsy ilaina intsony ny aingam-panahy fa aleo io firehana hita sy re etsy sy eroa (avy eto an-toerana sy avy any ivelany) io no hoenti-mamorona. Miverina ihany ny fanontaniana, mbola zavakanto ve ny iantsoana azy amin’izany ? Sa ve « voka-pirehana » na « kantom-pirehana » ?